किन ओलीले आफू या प्रचण्ड हट्नु पर्ने धारणा राखे ? (ओली मन्तव्यसहित) - Nepal Page Nepal Page
किन ओलीले आफू या प्रचण्ड हट्नु पर्ने धारणा राखे ? (ओली मन्तव्यसहित)
काठमाडौं ४ मंसिर । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत महिनाको २८ गते भएको सचिवालय वैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका आधारमा कि आफू हट्नु पर्ने कि प्रचण्ड हट्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । हिजो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको ससचिवालय बैठमा बोल्दै ओलीले प्रचण्डसहितका नेताहरुको प्रस्तावलाई आरोप पत्र भन्दै खारेज गर्ने मात्र बताएनन् कि दुई जना मध्ये एकजना हट्नु पर्ने निकै विस्फोटक अभिव्यक्ति दिए । तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै प्रतिवाद नगरीकन पार्टीभित हुने यस्ता छलफलबाट कोही पनि उत्तेजित हुने र आक्रोशित हुन नहुने खालले वैठकलाई नै प्रभावित गर्नेगरी धारणा राखेको महाससचिव विष्णु पौडेले बताए ।
ओलीले मन्तव्यका क्रममा आफ्नो जीवनकालमा नै यति संगीन आरोप कससैले नलगाएको समेत बताउंदै आगामी १३ गते हुने बैठकमा आफूले पनि छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिए । प्रचण्ड सहितका सचिवालयका ५ जना नेताको प्रस्तावले अध्यक्ष तथा प्रम ओली अत्यन्तै क्रुद्ध भएको ओली निकट नेताहरुले बताउंदै आएका छन् ।
संक्षिप्त बोलेका ओलीेले बैठकमा पनि भने यति गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि या त पुष्टि गरेर मलाई हटाउनु पर्यो या आरोप लगाउने प्रचण्डलाई हटाउनु पर्यो भने । बैठकपछि पनि प्रम ओली निकै क्रुद्ध मुद्रामा रहेको ओली निकट नेताहरुले बताएका छन् । तर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । बरु बामदेग गौतमले यस्तो अन्तरसंघर्षको बेलामा पूर्व एमालेमा पनि हामीहरुले माधव नेपाल महासचिव भएका बेला यस्ता आरोप लगाउने गरेको भन्दै कुनै अनौठौ नभएको बताएका थिए ।
हिजो भएको बैठक अत्यन्तै सौहष्र्द रुपमा भएपनि दुई अध्यक्षका बीचमा भावनात्मक सम्वन्ध बन्ने हो कि होइन भन्नेमा आम कार्यकतर्य चिन्तित भएको केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले बताए ।
यससस अघि कात्तिक २२ गते प्रचण्ड सहितका ५जना नेताले दुई पृष्टको बैठक बोलाउने बारे भन्ने पत्र प्रम ओलीलाई दिएका थिए । त्यो पत्रबाट आक्रोशित भएका ओलीले कात्तिक २५ गते प्रचण्डका नाममा १० पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै गल्ती प्रचण्डले गरेको तर आफूले सबै काम ठीक गरेको आशयको पत्र पठाएका थिए । ओलीको पत्रबाट अचम्भित भएका प्रचण्डले एकैपटक कात्तिक २८ गतेको बैठकमा ७ पृष्ठ लामो पत्र र १९ पृष्ठको प्रतिवेदन ओलीलाई हस्तान्तरण गर्दै सचिवालयका सबै सदस्यहरुलाई वितरण गरेका थिए । तत्कालै ती पत्रहरु मिडियामा ससार्वजनिक भएपछि नेकपा फुट्ने व्यापक भर्चा भएको थियो ।
प्रचण्डसहितका नेताहरुले भदौ २ढ गते जारी गरेको अपनि सससससहित अहिलेका पत्र र प्रस्तावको बैठकमा छलफल गरेर निश्कर्ष पुग्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । प्रचण्ड पक्षले बिधै प्रमको राजीनामा नमागेपनि त्याग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
भदौ २८ को बैठक यता बैठकका बेला बाहेक दुई अध्यक्षका बीचमा वान अन वान छलफल गरेका छैनन् । पूर्व एमालेका एकथरि नेताहरुले एमाले एक ठाउंमा हुनु पर्ने अभियान चलाएका छन् भने प्रचण्ड–नेपाल सपक्षले पूर्व समूहको आंखाबाट नभएर नेकपाको नयां आलोकमा पार्टीलाई बुझ्नु पर्ने बताउंदै आएका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षको प्रम ओलीले पार्टी निर्णण् अवज्ञा गरेर स्वेच्छाचारीढंगबाट अघि बढेको रुपान्तरण भएर सामुहिक रुपमा चल्न नचाहने भन्दै आलोचना गरेका छन् । उबा प्रम ओलीले प्रचण्ड सहितका नेताहरुले आफूले जति राम्रो काम गरेपनि विरोध मात्रै गर्ने र अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुससार आगामी १३ गतेसम्मको बैठकमा पुग्दा तिक्तता मेटिन सक्ने बताउन थालेका छन् ।
मंसिर ३को बैठकमा ओलीले व्यक्त गरेको धारणा यस्तो छ ।
समस्याको प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष प्रचण्ड (सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ )